ဝက်သားခေါက်ဆွဲကပ်ကြော် | Wutyee Food House
« ပါမုန့် ၀က်သားကပ်ကြော်
မုန့်လုံးရေပေါ် အုန်းနို့ဆမ်း »
April 6, 2011 by chowutyee ၀က်သားခေါက်ဆွဲကပ်ကြော်
ဒီဝက်သား ခေါက်ဆွဲကပ်ကြော်လေးက Happy မှာလည်း စားဖူးတယ်။ အိမ်ရှင်မလက်ရာက ဟင်းချက်ညီအစ်မ တစ်ဦးလုပ်နည်းလေးပေးတာနဲ့ လုပ်စားဖြစ်သွားတာပါ။ တကယ်စားလို့ကောင်းတယ်။ ဟင်းအထူးဆန်းလေးပေါ့နော်၊ ၀တ်ရည် အိမ်သားတွေကတော့ အရမ်းကြိုက်ကြတယ်။ တူတူလုပ်စားကြရအောင်…
၁။ ၀က်သား – ၁၅ကျပ်သား (နှုတ်နှုတ်စဉ်းထားပါ)
၂။ ခေါက်ဆွဲခြောက် – ၂ခွေ ( ရေနွေးဖြင့် ခဏပြုတ်ပြီ ရေအေးပြန်စိမ်ထားပါ)
၃။ ပဲငံပြာရည် (အကြည်) – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
၄။ ခရုဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၅။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၆။ ကြက်သားမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
ရ။ ကြက်ဥ – ၁လုံး (ခလောက်ထားပေးပါ)
၈။ တန်ပူရာမှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၉။ နှမ်းဆီ – ၄စက်
၁။ အရင်ဆုံး ခွက်တစ်ခုထဲတွင် ပြုတ်ထားသော ခေါက်ဆွဲဖတ်များ၊
တန်ပူရာမှုန့်၊ ရေ(အနည်းငယ်) တို့ဖြင့် ရောမွှေပြီ ဘေးတွင်ဖယ်ထားပေးပါ။
၂။ ပြီမှ ဇလုံတစ်ခုထဲတွင် (၀က်သား၊ ပဲငံပြာရည်၊ ခရုဆီ၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ကြက်ဥ၊ နှမ်းဆီ) တို့ကို သမအောင် နုယ်လိုက်ပါ။
၃။ နုယ်ထားသော ၀က်သားများကို လက်မအရွယ်အလုံးလေးများ လုံးပေးပါ။
၄။ ပြီးမှ ခေါက်ဆွဲဖတ်များဖြင့် ပုံတွင်ပါသည့်အတိုင်း ကပ်လိုက်ပါ။
၅။ ထို့နည်းအတိုင်း ကျန်ဝက်သားများကို ခေါက်ဆွဲဖတ်လေးများ ကပ်ပေးသွားပါ။
၆။ ပြီလျှင် ဒယ်အိုးထဲ ဆီများများထည့်ပြီ ဆီပူလာလျှင် ၀က်သားခေါက်ဆွဲကပ်လေးများကို ထည့်ပြီ မီးအသင့်တင့်ဖြင့် ထည့်ကြော်ပေးပါ။
ရ။ နီညှိရောင်သန်းလာလျှင် ဆီစုတ်စက္ကူထဲသို့ ပြန်ဆယ်ထားပေးပါ။
၈။ ကြွပ်ကြွပ်ရွရွ ၀က်သားခေါက်ဆွဲကပ်ကြော် လေးများကို ထမင်းပူပူလေးနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် စားသုံးနိုင်ပါပြီ…
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း | 20 Comments	20 Responses
on April 6, 2011 at 9:10 am | Reply hmone gyi
mike hla gyi lar pig yee doe ka lote pe…yummy
on April 20, 2011 at 10:59 am | Reply chowutyee
ဟားဟား ကိုယ်လည်း လုပ်စားကြည့်လေ…😀
on April 6, 2011 at 9:36 am | Reply နွေးနေခြည်
ကောင်းလိုက်တာ.. ပြင်ထားတာလည်း အရမ်းလှတာပဲ။ NICE IDEA!
on April 6, 2011 at 10:20 am | Reply ko nyein
new one. nice!
on April 20, 2011 at 11:00 am | Reply chowutyee
on April 6, 2011 at 12:32 pm | Reply win
hee ကြိုက်ရင် များများ စားသွားနော်
on April 6, 2011 at 4:30 pm | Reply ခင်ယမုံ
on April 20, 2011 at 11:01 am | Reply chowutyee
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ခင်ယမုံရေ…
on April 6, 2011 at 8:44 pm | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
၀က်သားခေါက်ဆွဲလုံးလေးတွေ နေပူမှာစိုးလို့ ထီးမိုးပေးထားတာလား
on April 20, 2011 at 11:03 am | Reply chowutyee
ဟီးဟီး ခုတလော နေပြင်းတာနဲ့ ဟင်းလေးပါ ထီးမိုးပေးထားရတာ။ မချောကို အများကြီး ကျွေးလိုက်ပြီနော်..😀
on April 30, 2011 at 10:04 am | Reply naing
မိုက်လိုက်တာ ဒီပို.စ် တင်တဲ့ သူလို မိန်းမမျိုး၇၇င် ကောင်းမှာပဲ xP xD
on April 30, 2011 at 10:28 am | Reply chowutyee
on July 24, 2011 at 7:45 am | Reply phyo pa pa
cooking in to the heart
very nice all of your cusine
on July 24, 2011 at 12:00 pm | Reply phyo pa pa
very nice all of your cuisine
on November 6, 2011 at 7:21 am | Reply Juliet Cho
ဒီနေ့ ဒီဟင်းလေး ချက်စားဖြစ်တယ်။ အရမ်းကောင်းတာပဲ။
ဟင်းချက်နည်းအသစ်လေးတွေ စောင့်နေမယ်နော …
on November 8, 2011 at 12:48 pm | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ ၀တ်ရည်လည်း ဒီဟင်းလေး အရမ်းကြိုက်တယ်.. ချက်နည်းအသစ်တွေလည်း ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်..😀
[…] April 6, 2011 ၀က်သားခေါက်ဆွဲကပ်ကြော် […]